ကုန်ကြမ်း Bevacizumab (216974-75-3) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Bevacizumab (216974-75-3)
SKU: 216974-75-3. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Bevacizumab (CAS 216974-75-3) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Bevacizumab အမှုန့် တစ်ဦး "monoclonal antibody ကို" အဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်နှင့် "Anti-angiogenesis" drug.Bevacizumab တစ်သွေးကြောထဲသို့တစ်ခုပြုတ်ရည် (သွေးကြောသွင်း, IV) မှတဆင့်ပေးထားသည်။ ပထမဦးဆုံးထိုး 90 မိနစ်အပ်သည်။ အဆိုပါပြုတ်ရည်အချိန်နောက်ဆုံးမှာကောင်းစွာသည်းခံလျှင်မိနစ် 30 ဖို့ကိုတိုစေနိုင်ပါတယ် ...
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 61 - 71 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp:2- 8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Bevacizumab (216974-75-3) အသုံးပြုမှု
ထို့အပြင် Avastin နဲ့ Mvasi ကိုခေါ် Bevacizumab (CAS 216974-75-3) ။
Bevacizumab တစ်သွေးကြောထဲသို့ဖြည်းညင်းစွာစီမံခန့်ခွဲဖို့အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Bevacizumab ဆေးပညာရုံး, ပြုတ်ရည်စင်တာ, ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံမှာဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်သူနာပြုအားဖြင့် isadministered ။ Bevacizumab များသောအားဖြင့်တိုင်း2သို့မဟုတ်3ရက်သတ္တပတ်တစ်ချိန်ကပေးထားသည်။
သငျသညျ bevacizumab သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိုးလက်ခံရရှိရန်အဘို့အဒါဟာ 90 မိနစ်ကိုယူသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆရာဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုသင့်ခန္ဓာကိုယ် Bevacizumab (216974-75-3) မှဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုကြည့်ဖို့နီးကပ်စွာသင်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ သငျသညျ bevacizumab သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိုးလက်ခံရရှိသည့်အခါ Ifyou ကိုမဆိုအလေးအနက်ပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသင်ဆေးဝါးများ၏သင်၏ကျန်နေသောဆေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုလက်ခံရရှိရန်အဘို့အ, ကများသောအားဖြင့် 30 မိနစ် 60 ယူပါလိမ့်မယ်။
Bevacizumab ဆေးထိုးဆေး၏ပြုတ်ရည်ကာလအတွင်းအလေးအနက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများမဆိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြ: ထွက်သက်တော်သည်ချမ်းတုန်, လှုပ်, ချွေး, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, chestpain, မူးဝြေခင်း, မော feeling, flushing, ယားယံခြင်း, အဖု, ဒါမှမဟုတ်အသင်းအဖွဲ့ချုပ်အခက်အခဲအသက်ရှူသို့မဟုတ်အတိုကောက်။ သင့်ဆရာဝန်သင်တို့သည်ဤသို့မဟုတ်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရလျှင်သင်၏အပြုတ်ရည်, ဒါမှမဟုတ်နှောင့်နှေးနှေးကွေးသို့မဟုတ်သင့်ကုသမှုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Bevacizumab (216974-75-3) ရက်တွင်သတိပေး
Bevacizumab ပုံမှန်ရာသီသံသရာနှောင့်အယှက်များနှင့်အများအပြားသက်ရောက်မှုအားဖြင့်မွေးဖွားအယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ တချို့က parameters တွေကိုလုံးဝ recover, ဒါမှမဟုတ်အလွန်နှေးကွေးစွာမူးယစ်ဆေးဝါး၏ followingdiscontinuation recover ပါဘူး။
Monoclonal ပဋိ "ကိုပစ်မှတ်ထား" ကင်ဆာကုထုံးတစ်ခုအတော်လေးသစ်ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပဋိကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝင် (ထိုကဲ့သို့သောပိုးအတွက်ပရိုတိန်းကဲ့သို့) တစ်ဦးကိုပဲတုံ့ပြန်ပဋိဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဆိုပါပဋိပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဖြင့်ပျက်စီးခြင်းအဘို့ပြုလုပ်အထိမ်းအမှတ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုပဲသွား attach ။ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်သိပ္ပံပညာရှင်ကိုပဲကိုက်ညီရန်ပရိုတိန်းဆုံးဖြတ်ရန်ကင်ဆာဆဲလ်တွေ (ပစ်မှတ်) ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ် antigen ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ထို့နောက် animaland လူ့ပရိုတိန်းကို အသုံးပြု. သိပ္ပံပညာရှင်များကပစ်မှတ်ကိုပဲမှပူးတွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့အထူး antibody ကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပဋိသော့သော့ခတ်ကိုက်ညီတူသောကိုက်ညီ antigen မှပူးတွဲပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းပညာဆဲလ် tohealthy လျော့နည်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့, တိကျသောဆဲလ်များကိုပစ်မှတ်ထားမှကုသမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ Monoclonal antibody ကိုကုထုံးသာ whichantigens အတွက်ကင်ဆာ (နှင့်သက်ဆိုင်ရာပဋိ) အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
Bevacizumab (216974-75-3) လူ့သွေးကြော endothelial growth factor (VEGF) ပစ်မှတ်ထားနှင့်ဟန့်တားသဖြင့် angiogenesis ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ VEGF ကြောင့်အသစ်ကသွေးကြောဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ် angiogenesis ဖို့ဆဲလ်ဆောင်အတွက်၎င်း၏ receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါတစ် cytokine (ဆဲလ်၏အပြုအမူအပေါ်တိကျသောသက်ရောက်မှုရှိသည်သောဆဲလ်များကဖြန့်ချိမယ့်သေးငယ်တဲ့ပရိုတိန်း) ဖြစ်ပါသည်။
AASraw ထံမှ Bevacizumab ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို